Mandarin ၏ Compote - ပန်းသီး, လိမ္မော်သီး, cranberries နှင့်ဆောင်းရာသီနှင့်အတူရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများ
Mandarin ၏ Compote - အရသာချက်ပြုတ်နည်းများအသုံးဝင်သော Citrus သောက်စရာ
Mandarin ၏ Compote - တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောပေမယ့်အလွန်အရသာများနှင့်မွှေးကြိုင်အဖျော်ယမကာ။ အတော်များများကလိမ္မော်ပျော့ဖတ်ကနေ, ဒါပေမယ့်လည်းခွံထဲကနေမသာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်, သွန်းလောင်းသူကမကြာခဏနံ့သာမျိုးကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ပိုပြီးအရသာပေးရကွောငျးသိရဖို့စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။
Mandarin ၏ compote ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘိဓါန် Mandarin- compote - ထိုဝယ်ယူဖျော်ယမကာတစ်ခုလှပအသုံးဝင်သောအခြားရွေးချယ်စရာ။ ဒါကြောင့်အလွယ်တကူစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ, ဒါပေမယ့်တစ်အရသာရှိတဲ့သောက်ရနိုင်ရန်အတွက်အချို့အသိပညာလိုအပ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ပြအကြံပြုချက်များလုပ်စရာမလိုပဲတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးပါမည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ Mandarin ၏ Compote ဆူမီး 5-7 မိနစ်ခန့်ပိတ်ထားသည် သာ. ကောင်း၏ပြီးနောက်ရှည်လျားလွန်းချက်ပြုတ်, သွန်းလောင်းပိတ်လိုက်အဖုံးအောက်မှာပြသနာတွေစေပါဘူး။
အရသာအဘို့အသီး compote ၌သင်တို့၏အကြိုက်မှ vanilla, သစ်ကြံပိုး, လေးညှင်းပွင့နှင့်အခြားနံ့သာမျိုးကို add နိုင်ပါတယ်။
Stewed လိမ္မော်ခွံ တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သော, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရသာရှိပါတယ်။ ခွံရန်, သောက်မလိုအပ်သောခါးသီးမှုမပေးသောထားပြီးသူမ၏ဆူရေကူးလောင်း။ သွန်းလောင်းများ၏မေတ္တာရပ်ခံချက် citric အက်ဆစ်, သဘာဝနှင့်လတ်ဆတ်ညှစ်သံပုရာဖျော်ရည်ကို add လို့မရပါဘူး။ တစ်ဦး compote အတွက်သစ်ကြံပိုးချောင်းကိုနှင့် vanilla ခွံလည်းပိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လတ်ဆတ်တဲ့လိမ္မော်ခွံ - 500 ဂရမ်;
သကြား, citric အက်ဆစ် - မြည်းစမ်းခြင်းငှါ၎င်း,
ထိုအခါအရည်ညှစ်ခြင်းနှင့်အညိုရောင် Blender နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ရရှိလာတဲ့ slurry မြည်းစမ်းဖို့ citric အက်ဆစ်, သကြားထပ်ထည့်, တဖန် filter, ထိုဘီယာအရက်ချက်, အနာစိမ်းထည့်သွင်းထားသည်။
Mandarin ၏ compote အအေးပြီးပါက, ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Mandarin နှင့်ပန်းသီး၏ Compote - စာရွက်
Mandarin နှင့်ပန်းသီး၏ Compote - အရသာရှိတဲ့နှင့်ပူပြင်းခြင်းနှင့်အအေးဖြစ်လတံ့သောအနံ့သောက်။ ချိုမြိန်-ချဉ်ပန်းသီးမျိုးပေါင်းသုံးစွဲဖို့ဦးစားပေးမည်ဤကိစ္စတွင်။ အဲဒီအစားအနည်းငယ် ostuzhennoy သောက်စရာအတွက်သကြားအရသာမှပျားရည်ထည့်နိုင်သည်, ထို့နောက် compote ပင်ပိုမိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ပန်းသီး -4PCs; ။
ရေ - 2.5 လီတာ;
လိမ္မော် -4PCs; ။
တစ်နံ့သာရောစပ်, သကြား - မြည်းစမ်းဖို့။
ပြီနောက်ဟင်းအတွက်အသီးချထားပါ, ရေလောင်းပြီးဆူအောင်တည်ဆောင်ကြဉ်း, သကြားနဲ့မြည်းစမ်းဖို့နံ့သာမျိုးကိုထည့်ပါ။
ထို့နောက်အအေးနှင့်အစေခံရန် compote မသွားအောင်ဖို့ခွင့်ပြု, မီးကို turn off, 3-4 မိနစ်အနိမ့်အပူပေါ်ပြုတ်။
Mandarin နှင့်လိမ္မော်သီး၏ Compote - စာရွက်
တစ်နေ့လျှင် Mandarin ၏ကြော် compote အများကြီးကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်နှင့်မဆိုဝယ်ယူဆိုဒါ tastier တံ့သောသောက်စရာ, ပြင်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆောင်းရာသီတွင်တစ်ဦး compote မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ကြွယ်ဝစေ။ သကြားဓာတ်ပမာဏကိုတိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား, သူတို့ရဲ့အရသာဦးစားပေးပေါ်တွင်အခြေခံနိုင်ပါသည်။ ပျားရည်ကိုချစ်သောသူတို့အားသာ, လုံခြုံစိတ်ချစွာအစားသကြားအနည်းငယ် lukewarm compote ထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင် - 1 pc; ။
လိမ္မော် -3PCs; ။
သကြား - 5, အနုပညာ။ ဇွန်း,
လိမ္မော်ရောင်အခွံ -5ဂရမ်
ဆူမှအပူရေအစိတ်အပိုင်းများ, လောင်းခြစ်ခွံ, သကြား, အနာစိမ်းအနိမ့်အပူပေါ်5မိနစ်ပေါင်းထည့်, ပြီးတော့စွပ်ပြုတ်လိမ္မော်နှင့်လိမ္မော်သီးကိုပိတ်ထားခြင်းနှင့်တွန်း။
အဘိဓါန် Mandarin- compote နှင့် cranberry
cranberry, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့် vanilla ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူပြည့်နှက် compote Mandarin - ချမ်းအေးထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အပူ၏ပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုကောင်းမြတ်သောအရာသည်ပုံမှန်မဟုတ်အရသာအဖျော်ယမကာ။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပိုမိုမြန်ဆန် recover ကိုကူညီဗီတာမင်တွေအများကြီးပါဝင်သောကြောင့်အအေးမိ၏ရာသီအတွက်ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
cranberry - 100 ဂရမ်;
အဘိဓါန် Mandarin- -2PCs; ။
သံပုရာ - 1/3;
vanilla သကြား - 1 အထုပ်;
သကြား - မြည်းစမ်းဖို့။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောပြီးနောက်မြည်းစမ်းဖို့သံပုရာဖျော်ရည် vanilla သကြားနဲ့ granules သကြားထည့်ပါ။
3-4 ပြီးနောက်ဆူရဲ့ start ပြီးနောက်မိနစ် စွပ်ပြုတ် cranberries နှင့်အဘိဓါန် Mandarin- ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ဖုံးအပြင်းအထန်တောင်းဆို။
Mandarin နှင့်သစ်တော်သီး၏ Compote - စာရွက်
အဘယ်သူ၏စာရွက်လျှော့တင်ပြထားပါသည် Mandarin ၏ Compote, သစ်တော်သီး၏ထို့အပြင်နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအသီးဿုံပေါင်းစပ်, သွန်းလောင်းသည်အလွန်အရသာရှိတဲ့အထဲကလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေကြသည်။ ဒါဟာဿုံရေငတ် quenches နှင့်ဗီတာမင်နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ် saturates ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်တန်းသင်ပြီးသားအစာကိုစားချင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်း, အသီးနင်းထားနိုင်ပါတယ်။
သစ်တော်သီး -4PCs; ။
ရေ - 1.5 လီတာ။
1 အဘိဓါန် Mandarin- အရေခွံဆူမှအပူရေဖန်ခွက်, ပြည့်စုံသည်, ထို့နောက်ထုတ်ယူလက်သည်း။
အဆိုပါကျန်ရှိနေသောရေသကြားနဲ့လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား add, ပြုတ်သည်။
ရလဒ်ရည်, ယခင်ကကိုပြင်ဆင်ဟင်းရည်, 10 မိနစ်အနိမ့်အပူမှာအသီးတစ်စက်နှင့်အနာစိမ်းရန်။
အဆိုပါမျက်မှန်အပေါ်ထွက်ချထားအသီးတဖဲ့, compote လောင်းတို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏။
persimmon နှင့်လိမ္မော်၏ Compote
ကချက်ပြုတ်ပေးသောအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်ခန့်မှန်းမဟုတ်ဘူး, အဘို့ဤသောက်စရာကြိုးစားပါလိမ့်မည်ကိုအဘယ်သူ, persimmons လတ်ဆတ်တဲ့အပေါ်စားသောက်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဤသည်မှန်ကန်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ပြီးသားများစွာသောအသီးကိုစား, သူတို့သည်နေဆဲရှိသည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြသည်မဟုတ်, သင်တို့အလွန်အမင်း appetizing နှင့်အရသာသောက်ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ သာမှည့်သောနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအရာ, persimmon, ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ရှာရုန်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသင့်လျော်ဘူး။
persimmon -2PCs; ။
အချဉ်မွှေးပန်းသီး -2PCs; ။
ရေ -2လီတာ။
အစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြားချပ်, Mandarin သို့ဖြတ် Persimmons နှင့်ပန်းသီး။
အနိမ့်အပူမှာ persimmon နှင့်အဘိဓါန် Mandarin- လိမ္မော်ရောင်နှင့်ပန်းသီးကို 10 မိနစ် compote ပြုတ်။
စပျစ်သီးနှင့်အ Mandarin ၏ Compote
လိမ္မော် သီးဖျော်ရည်, စာရွက် အစိတ်အပိုင်းများများသောအားဖြင့်ကအသုံးပြုကြသည်သော်လည်းအောက်တွင်ပြသောကြောင့်တစ်ဦးဂန္ကိုခေါ်မရပါ။ စပျစ်သီးဆို ယူ. , အပြာနှင့်အစိမ်းရောင် berry သီးသောက်အရသာဖြစ်လိမ့်မည်နိုင်ပါ။ အများဆုံးအသုံးဝင်သောက်ရဖို့, အသီးကိုပြုတ်နှင့်သွန်းလောင်းဆူပွက်ရည်နှင့်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုမပေးပါဘူး။
မှောင်မိုက်သောစပျစ်သီး - 200 ဂရမ်;
Mandarin - 300 ဂရမ်;
ရေ - 1 လီတာ;
Mandarin ၏ Compote - စာရွက် multivarka
Multivarki - Mandarin ၏ Compote တစ်ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတင်ပြထားပါသည်, ခေတ်သစ်ကူမသောသူ၏အကူအညီနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအလျင်စလိုရန်, ကိရိယာ၏ပန်းကန်ထဲမှာချက်ချင်းအဆင်သင့်အထိသကြားနဲ့အသီးများနှင့်အနိမ့်အပူထမင်းချက်ထားပြီးလျှင်, ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုလောင်းနိုင်ပါသည်။ သငျသညျကို "သတ်" mode ကိုသုံးနိုငျ, နှင့်အရည်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအသီးကိုချက်ချင်း "အပူ" mode ကိုအတွက်ယူနစ်ထား 10-15 မိနစ်ကစွန့်ခွာပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကြီးမားသောလိမ္မော် -5PCs; ။
ရေ - 1.5 လီတာ;
သကြား - 200 ဂရမ်
Multivarki ခုနှစ်တွင်ခွက်ကိုသကြားလောင်းရေထဲသို့သွန်းလောင်းနှင့် "steaming" mode ကိုဆူဖို့ဆောင်ခဲ့လေ၏။
ရေနွေးနဲ့ပြုတ်ရည်ထဲမှာချန်လှပ်နှင့်ခွံ Mandarin နှင့် "သတ်" mode ကိုအခြား 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
Mandarin ၏ Compote - အချိန်သည်ဆောင်းကာလများအတွက်စာရွက်
ဆောင်းရာသီအသုံးဝင်သောနှင့်မွှေးအိမ်လုပ် compote တစ်အိုးရဖို့နှင့်၎င်း၏သာယာသောအရသာခံစားဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်မများမကြာခဏအမျိုးမျိုးကိုပွငျဆငျ စွပ်ပြုတ်ပန်းသီး , သစ်တော်သီး, Plum, apricots နှင့်သီး။ အနည်းငယ်လူများအဘိဓါန် Mandarin- တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာရှိတဲ့သောက်စေနှင့်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုများအတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းကိုငါသိ၏။
လိမ္မော်ချွတ်ချွတ် - 1 ကီလိုဂရမ်;
သကြား - 1 ခွက်ကို;
သစ်ကြံပိုး - 1 ချောင်းကို;
ရေ - 1.3 လီတာ။
ထိုအခါရည်, အနာစိမ်း, သူတို့အပေါ်မှာသွန်းလောင်း Mandarin နှင့်လိပ်သွန်းလောင်းလေ၏။
ဘဏ်များအပေါ်ကိုဖွင့်, ဒါအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ Mandarin ၏ compote လုံးဝချအအေးထားပါတယ်အထိခြုံများနှင့်စွန့်ခွာ။
နွေရာသီသောက်စရာ - စာရွက်
အရသာချက်ပြုတ်နည်းများအသုံးဝင်သောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး - အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ Raspberry ၏ Compote
Currant compote - အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများအသုံးဝင်သောသောက်ကွက်လပ်
ကျနော်တို့ Alanis Morissette $2သန်းလက်ဝတ်ရတနာခိုးယူ
ဘောင်းဘီ-ငှက်ပျောသီးဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ဒိန်ခဲ Battery ကိုအတွက်ခရမ်းချဉ်သီး
ဖက်ရှင်ဖိနပ် - နွေဦးကို 2014 ခုနှစ်
ပျားရည်ဆံပင် - ကောင်းမွန်သော
ပေါင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Shilajit - ကုသမှု
ကဖျင်ပုဆိုး lay မှဖြစ်နိုင်ပါသလော
စိန့် Panteleimon ၏ဆုတောင်းချက်